Thibi Recipes - ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား မျဉ်းချပ်ဖြင့်ရေးဆွဲဖော်ပြခြင်း
ယခင်ဒေတာချက်ပြုတ်နည်း-၁ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ဘားချပ်ဖြင့် မည်သို့ ရေးဆွဲဖော်ပြမည်ကို ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းအချက်အလက်များကို မျဉ်းချပ်အသုံးပြု၍လည်း ရေးဆွဲ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ဆက်တိုက်ကိန်းစဉ်များ (continuous data) များကို မျဉ်းချပ်ပေါ်တွင် ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ် ၁၉ရောဂါတွေ့ရှိမှု အတက်အကျလားရာပုံစံကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ယခု ဒေတာချက်ပြုတ်နည်း-၂တွင် Covid Myanmar Dashboard မှထုတ်ပြန်ထားသော ကိုဗစ်၁၉ရောဂါတွေ့ရှိမှုအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ မျဉ်းချပ်တစ်ခုတည်ဆောက်နည်းကို တင်ပြပေးသွားပါမည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်၁၉ရောဂါပိုး တွေ့ရှိမှုနှုန်းနှင့်သေနှုန်း စုစုပေါင်းအရေအတွက် (cumulative number) ကို အသုံးပြု၍ ဤမျဉ်းချပ်ကို ရေးဆွဲသွားပါမည်။ မျဉ်းချပ်ရေးဆွဲခြင်းအပြင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားရာကာလ (pandemic’s timeline) တလျှောက် အခြေအနေကို ရှင်းလင်းပေးမည့် အညွှန်းစာသားကို မည်သို့ရေးထည့်ရမည်ကိုလည်း တင်ပြပေးသွားပါမည်။
ဤ ဒေတာချက်နည်းပြုတ်နည်း recipe သည် Institute for War and Peace Reporting မှ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
Google Sheets, Datawrapper
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကားချပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွဖန်တီးကြပါမည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း ဒီမျဉ်းချပ်တွင် အညွှန်းစာသားမှတ်ချက်များ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထူးခြားသော ဖြစ်ရပ်များ (သို့မဟုတ်) သမိုင်းမှတ်တိုင်များကို အစီရင်ခံသောအခါ အညွှန်းစာသားများသည် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒေတာတစ်မျိုးတည်းဖြင့် အလွယ်တကူ မြင်သာအောင် မတင်ဆက်နိုင်ပါ။ ဤအညွှန်းစာသားများနှင့် ဒေတာများကို ပုံဖော်ဆက်စပ်ကာ အဓိကဆိုလိုရင်းကို ထိထိမိမိ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။ Covid-19 နှင့်ပတ်သတ်၍ အညွှန်းစာသားထည့်သွင်းနိုင်သော ဖြစ်ရပ်များမှာ ပထမဦးဆုံး ပိုးတွေ့ ခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ အစိုးရ၏ အစီအမံများ (သို့) သေဆုံးသူဦးရေ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ချိန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကားချပ်တွင် ဧပြီလ ၁၈ရက် နေ့တွင် စတင်ထုတ်ပြန်သည့် “ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နေအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်” (Yangon Stay-at-home Announcement) ကိုရည်ညွှန်းသည့် အညွှန်းစာသားကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်များပြင်ဆင်ခြင်း အဆင့်ဆင့်သည် အရှေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ဘားချပ်ဆွဲသည့် နည်းလမ်းနှင့် အားလုံးနီးပါးတူသော်လည်း အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် (timeframe) တစ်ခုသာ ကွာခြားပါသည်။ ပထမ ဒေတာချက်ပြုတ်နည်း-၁ တွင် ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားသည့် အချိန်ကာလအတွက် ရေးဆွဲခဲ့သော်လည်း ယခုနည်းစနစ်အတွက်မူ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ကို ပထမဆုံးရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိသူ (၂)ဦး တွေ့ရှိသည့် မတ်လ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်ထားပါသည်။
ပထမဦးစွာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်းတွင် ၎င်းအချက်အလက်များ၏ အရင်းအမြစ်ကို စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ Covid-19 နှင့်ပတ်သတ်သော အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနများ နှင့် အခြားပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အေဂျင်စီများမှ ထုတ်ပြန်ထားသောအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် အချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်များပြုလုပ်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
ဤ ဒေတာချက်နည်းပြုတ်နည်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် coronavirus ဖြစ်ပွားမှု နှင့် သေဆုံးမှု စုစုပေါင်း အရေအတွက်များကို နေ့စဉ်အလိုက် သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာအစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် Covid-19 နှင့် ပတ်သတ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းများကို တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကြေငြာခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ Covid Myanmar Dashboard ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဝန်ကြီးဌာနမှ နေ့စဥ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော ကြေငြာချက်များကို စုစည်းထားသည်။ သင့်အနေနှင့် သူတို့ အချက်အလက်များကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ထားသောအချက်အလက်များကို နှိုင်းယှဥ်နိုင်ပါသည်။
အခုဆို ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်အလက်အရင်းအမြစ်ကို တွေ့ရှိပြီးပြီဆိုတော့ ချက်ပြုတ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
“Covid Myanmar Dashboard.” သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
Dataset ကို‌ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် “Data Set” bottom အား ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင့်အနေဖြင့် Covid-19 နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များ အားလုံးပါ၀င်သည့် Google Sheet သို့ ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်တွင် coronavirus ဖြစ်ပွားမှုနေ့စဉ်အရေအတွက် လိုအပ်သောကြောင့်သက်ဆိုင်ရာ tab ကိုရှာဖွေထုတ်ယူရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော အချက်အလက်သည် “cumulative number” အမည်ရှိ tab တွင် ပါရှိသည်။
၁.၂) Google Sheets သို့ တင်သွင်းခြင်း
ဒေတာများကို Google Sheets တွင်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် spreadsheet အသစ်ထဲသို့သာ ကူးယူနိုင်သည်။
“cumulative number” tab ကို Right-click နှိပ်ပါ။
“Copy to” ကို မှတ်ပါ။
“New spreadsheet” မှတ်ပါ။
“Open Spreadsheet” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်သည် Graph တစ်ခုပြုလုပ်ရန် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကို အောင်မြင်စွာ စုဆောင်းပြီးပါပြီ!
၁.၃) Data များကို ရှင်းလင်းခြင်း
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Dataset ကိုစတင်ရှင်းလင်းပြီး မလိုအပ်သော variable များကို ဖယ်ရှားကြပါမည်။ ဒေတာများကိုမရှင်းမီ ကျွန်ုပ်တို့သည် “cumulative cases” (ကော်လံ Z) နှင့် “cumulative deaths” (ကော်လံ AB) တို့သည် value (ကိန်းဂဏန်း) ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးပါ။ ဤကော်လံများကိုစစ်ဆေးလျှင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း formula / function ဖော်ပြသည့် cells အချို့ကို တွေ့နိုင်သည်။
ဤသတိချပ်ရန်မှာ “cumulative death” (ကော်လံ AB) ရှိ cells တန်ဖိုးအချို့ကို “deceased” (ကော်လံ E) အပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် “deceased” (ကော်လံ E) ကိုဖယ်ရှားလျှင် “cumulative death” (ကော်လံ AB) ရှိတန်ဖိုးများသည် အလိုအလျောက် ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
“cumulative cases” နှင့် “cumulative death” column တွေ တန်ဖိုးတွေဖြစ်အောင် ဒီကော်လံတွေကိုကော်ပီကူးပြီး paste လုပ်ရမယ်။ ပထမဦးစွာ “cumulative cases” ကော်လံကို Copy ယူပြီး Paste လုပ်ပါမည်။
“cumulative cases” ကော်လံကို select လုပ်ပါ။
Right-click နှိပ်ပါ> Copy ကို မှတ်ပါ။
အဆိုပါ “cumulative cases” ကော်လံ၌ပင် Right-click နှိပ်ပြီး Paste special > Paste values only ​​ကိုရွေးချယ်ပါ။
“cumulative death” ကော်လံ ကိုလည်း အထက်ပါ အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မလိုအပ်သောအတန်း (rows) နှင့်ကော်လံများ (columns) ကို စိတ်ချလက်ချဖျက်နိုင်ပါပြီ။
Covid-19 စတင်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ နေ့စဥ်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုသာ ပြသမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤနေ့စွဲမတိုင်ခင်အထိ rows အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
အချို့ Rows များသည် ဖုံးကွယ်နေနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက ဘယ်ဘက် Rows များအနီးရှိ မြှားခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။ (အောက်ပါပုံတွင်ရှုပါ)
ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်သည့် Row2(from 01/02/2020) မှ Row 51 (23/08/2020) အထိ select မှတ်ပါ။
Right-click နှိပ်ပြီး Delete rows2- 51 ကို Select လုပ်၍ ဖျက်ပါ။
Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုနေ့စဉ်အရေအတွက်ကို ပုံဖော်ပြသရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် “announced date” "cumulative case" နှင့် "cumulative death" variable များကိုသာ လိုအပ်လိမ့်မည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤ variables ရှိရာ columns (B, Z, AB) ကို ထားခဲ့ပြီး အခြားကော်လံများကို ဖျက်ပစ်ရပါလိမ့်မည်။အ ချို့ကော်လံများကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ဖုံးကွယ်ထားသည့် columns များကို ဖြန့်ကျန့်လိုပါက column ခေါင်းစီးအနီးရှိ မြှားခလုတ်များကို နှိပ်ပါ။ (အောက်ပါပုံတွင်ရှုပါ)။
ထို့နောက် မလိုအပ်သည့် columns များကိုSelect လုပ် > Delete နှိပ်၍ ဖျက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ သက်ဆိုင်ရာ variable ၃ ခုကို ရပါပြီ။ သူတို့ခေါင်းစီးကို သင့်တော်အောင် အောက်ပါအတိုင်း ထပ်ပြောင်းကြပါစို့။
announced date > Announced Date
cumulative cases > Cumulative Cases
cumulative death > Cumulative Deaths
နောက်ဆုံး Google Sheet သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သင့်သည် -
Datawrapper ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် အချက်အလက်များထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ယခုဖန်တီးထားသော Google Sheet ကို အခြား ဆော့ဖ်ဝဲလ်များထံသို့ တင်ပို့အသုံးပြုခွင့်ပေးရပါမည်။
ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ Share ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Get Link သေတ္တာလေးအတွင်းရှိ Change to anyone with the link ကိုနှိပ်ပါ။
ဘားချပ်ကိုဆွဲရန် အဆိုပါ URL ကို ကော်ပီကူး၍ Datawrapper တွင် paste လုပ်မည်။
Datawrapper ကို အသုံးပြု၍ ကားချပ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ခြင်း
ဤအဆင့်တွင် Datawrapper ကိုသုံး၍ မျဉ်းချပ်ကိုစတင်ရေးဆွဲပါမည်။
ပထမဆုံး Datawrapper ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် https://www.datawrapper.de/ သို့သွားပါ။‍
Start Creating ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ထိုအခါ အောက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Datawrapper work page ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ရိုးရှင်း လွယ်ကူသော အဆင့်(၄)ဆင့်ဖြစ်သည့် Upload Data- အချက်အလက်များ Upload လုပ်ခြင်း; Check & Describe- အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်း; Visualize- ကားချပ်များပုံ‌ဖော်ရေးဆွဲခြင်း; Publish & Embed- ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် embed လုပ်ခြင်း တို့ကိုသုံး၍ Datawrapper တွင် အချက်အလက်ပြကားချပ်များ တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
၂.၁) အချက်အလက်များ Upload လုပ်ခြင်း
ပထမအဆင့်ဖြစ်သည့် Upload Data အတွက် အချက်အလက်များကို upload လုပ်ရပါမည်။
Import Google Spreadsheet ကို ရွေးပါ။
ယခင်အဆင့်တွင် ဖန်တီးထားသော Google Sheet ၏ URL ကို EnteraURL toaGoogle Sheet တွင်ထည့်သွင်းပါ။ (အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဤပေးထားသော URL ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။)
Proceed > ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ခေါင်းစဉ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် နေ့စွဲ “Announced Date” အောက်မှ အချက်အလက်များကို လူအများ ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်သည့်ပုံစံသို့ Datawrapper က ပြောင်းလဲပေးသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤပုံစံအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
“Cumulative Cases” နှင့် “Cumulative Deaths” တို့၏ ကော်လံအမျိုးအစားကို Number ဖြစ်ပါစေ။
ထို့နောက် Proceed > ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၂.၃) ကားချပ်များပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်း
Chart Type ခလုတ်ကိုရွေးပါ။
မျဉ်းချပ်ဆွဲရန် Lines ကိုရွေးပါ။
Refine ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
Refine နေရာတွင် ရေပြင်ညီဝင်ရိုး (horizontal axis)၊ ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုး (vertical axis)၊ အတက်အကျလားရာ ပြမျဉ်းများ (trend lines)၊ သင်္ကေတများ (symbols) နှင့် အညွှန်းများ (labels) တို့ကို တစ်ခုချင်းစီ အသေးစိတ်ပုံစံချပါမည်။ ထိုသို့ပုံစံချပြီးလျှင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သေသပ်စွာရေးဆွဲထားသော ကားချပ်ကိုရရှိပါမည်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် Horizontal axis panel တွင် ရေးသွင်းမည့်နေ့စွဲပုံစံကို ပြောင်းပါမည်။ Horizontal axis သေတ္တာအတွင်းတွင်
Select Column တွင် Announced Date ကိုရွေးပါ။
Tick format တွင် “April, 2,3” ကိုရွေးပါ။‍
Grid lines တွင်“tick marks” ကိုရွေးပါ။
Vertical Axis panel တွင်-
Grid lines တွင် “linear” ကိုရွေးပါ။ (နောက်ထပ်ဖော်ပြမည့်ကားချပ်ဆွဲ နည်းသစ် တွင် linear နှင့် log ကားချပ်များဆွဲနည်းကို တင်ပြပေးသွားပါမည်။)
Number format တွင် “1,000[.00]” ကိုရွေးပါ။
Grid lines ပြရန် tick marks ကိုရွေးပါ။‍
Grid labels တွင် “inside” နှင့် “left” ကိုရွေးပါ။
Customize lines panel တွင် မျဉ်းကြောင်းများ၏ အရောင်ကိုပြောင်းပါမည်။
Customize colors… ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Select element(s) သေတ္တာတွင် ခေါင်းစဉ်ခွဲတစ်ခုချင်းစီအတွက် အရောင်တစ်မျိုးစီရွေးချယ်ပါမည်။‍
Cumulative Cases ခေါင်းစဉ်ခွဲအတွက် Orange (လိမ္မော်ရောင်) ကိုရွေးပြီး Cumulative Deaths ခေါင်းစဉ်ခွဲအတွက် Red (အနီရောင်) ကိုရွေးပါ။
Line width (မျဉ်းအကျယ်) နှင့် Line dashes (မျဉ်းစက်) များကိုလည်း ပုံစံချပါမည်။ မိမိလိုချင်သည့် မျဉ်းအကျယ်ရရှိသည်အထိ ခေါင်းစဉ်ခွဲအမည်ကို ဆက်တိုက်ဖိနှိပ်ပါ။
Cumulative Cases နှင့် Cumulative Deaths နှစ်ခုလုံးအတွက် Line width တွင်အပါးဆုံးမျဉ်းကို ရွေးပါ။
Line dashes ကိုမပြောင်းရ။‍
Interpolation တွင် “linear” ကိုရွေးပါ။
ဆက်လက်၍ Labeling panel ကို edit လုပ်ပါမည်။
Line Labels တွင် right ကိုရွေးပါ။
Draw lines connecting labels to lines ဘေးတွင် အမှန်ခြစ်ကိုနှိပ်ပါ။
Use line color for labels ကို ရွေးပါ။ မျဉ်းအရောင်နှင့်မျဉ်းအတွက် အညွှန်းစာသားတို့ အရောင်တူညီမှသာ ဆက်စပ်ကြည့်ရှု ရန်လွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။
Show tooltips ကိုရွေးပါ။‍
Line symbols ဘေးတွင် အမှန်ခြစ်ကိုနှိပ်ပါ။
Shape တွင် “circle” နှင့် “first & last” ကိုရွေးပါ။
Size ကို2ထားပါ။‍
Opacity ကို 0.5 ထားပါ။
‍Show Tooltip တွင် ဝင်ရို: X (နေ့စွဲ) နှင့် Y (စုစုပေါင်းပိုးတွေ့ရှိမှုအရေအတွက်) တို့၏ ပကတိတန်ဖိုးများကို ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မည်။ မျဉ်းတလျှောက် မြှားကိုထောက်ရွှေ့ကြည့်လျှင် နေ့စွဲအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတို့ တွဲလျက်ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရပါမည်။
Annotation အပိုင်းသို့ဆက်သွားပါမည်။ ဤနေရာတွင် ကားချပ်ကိုရည်ညွှန်းသည့် ခေါင်းစဉ်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပါမည်။
အညွှန်းရေးသားသည့်အပိုင်း Annotate မှ ကွက်လပ်နေရာများတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
Title: Covid-19 Cumulative Cases and Deaths in Myanmar
(ခေါင်းစဉ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း)
Description: 121,280 cases and 2,579 deaths have been recorded in Myanmar as of December 26, 2020.
(ရှင်းလင်းချက်။ မှတ်တမ်းများအရ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်၁၉ရောဂါပိုး တွေ့ရှိသူစုစုပေါင်း ၁၂၁,၂၈၀ ဦးနှင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၂,၅၇၉ ဦး ရှိပါသည်။)
Note: This chart shows the number of confirmed COVID-19 cases and deaths in Myanmar since March 23, 2020.
(မှတ်ချက်။ ဤမျဉ်းချပ်တွင် ၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်းကိုဖော်ပြထားပါသည်။)
Data Source: Dr. Nyein Chan Ko Ko (referenced from the Ministry of Health and Sports)
Link to data source: https://datastudio.google.com/reporting/445c1281-c6ea-45e4-9bc0-5d561c511354/page/I44CB
Byline: (Type in your organization)
(အခြား။ မိမိ၏ အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကို ဖြည့်သွင်းပါ)
နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် မျဉ်းချပ်တွင် မိမိဖော်ပြလိုသည့် အဓိကအချက်အလက်များကို မှတ်စုအညွှန်း စာသားအဖြစ်ထည့်သွင်း၍ ဖော်ပြပါမည်။ ပထမကိုဗစ်လှိုင်းကို အောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတွင် “ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နေအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်” သည်အရေးပါသောမူဝါဒဖြစ်ကြောင်း သင့်ဆောင်းပါးတွင် ရှင်းလင်းရေးသားမည်ဆိုပါက ယင်းအချက်ကို မိမိရေးဆွဲထားသော မျဉ်းချပ်တွင်လည်း ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
Highlight range panel တွင်-
+ Add range highlight ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ “Click or drag directly on the chart to createarange highlight” လုပ်ရန်ပြောပါလိမ့်မည်။
ကားချပ်ပေါ် တနေရာရာကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါ ဒီဇီုင်းသေတ္တာ (design box) ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
Orientation အတွက် ပထမအကွက်ကိုရွေးပါ။
Type အတွက် Line ကို ရွေးပါ။
Position ဘေးကွက်လပ်တွင် 2020/04/18 ဟုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒေါင်လိုက်မျဉ်းသည် “ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နေအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်” ထုတ်သည့်နေ့သို့ ရွှေ့သွားပါလိမ့်မည်။
Color အတွက် Indigo နှင့် Hex code: #264c6b ကိုရွေးပါ။
Opacity တွင် 56% ရေးသွင်းပါ။
Width အတွက် အပါးဆုံးမျဉ်းကိုရွေးပါ။
Dashed line တွင် အခြားမျဉ်းများနှင့်သိသာထင်ရှားစွာခွဲခြားနိုင်ရန် နောက်ဆုံးမှ (----) ကိုရွေးပါ။
အဓိကအချက်အလက်ကိုပြသည့်မျဉ်းအတွက် မှတ်စုအညွှန်းစာသားကို ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ In the Text annotations panel တွင်
+ Add text annotation ကိုနှိပ်ပါ။
ထင်ရှားစွာပြသရန်ရေးဆွဲထားသည့်မျဉ်းဘေးတွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါ Text annotations panel တွင် ဒီဇိုင်းသေတ္တာ (design box) ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
Text ဘေးကွက်လက်တွင် Yangon Stay-Home Announcement ဟု စာရိုက်ထည့်ပါ။
Text style ကို Bold လုပ်ပါ။
Font size ကို 12 ထားပါ။
‍Text outline ဘေးတွင် အမှန်ခြစ်ကိုနှိပ်ပါ။
‍Mobile နှင့် Desktop နှစ်မျိုးလုံးဘေးတွင် အမှန်ခြစ်ကိုနှိပ်ပါ။
စာသား၏ အကျယ် Width ကို 25% ထားပါ။
စာသားနေရာချရာတွင် Position အတွက် စာသားကို ကားချပ်အတွင်းသို့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဆွဲသွင်း (drag လုပ်) ၍ထည့်ပါမည်။ ထင်ရှားစွာပြသရန်ရေးဆွဲထားသည့်မျဉ်းဘေးတွင် စာသားကိုနေရာချပါ။
Anchor point အတွက် နေရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသေးသည်။ Anchor point grid တွင် ရွေးချယ်စရာကိုးခု ရှိသည့်အနက် စာသားကိုအလယ်တွင်ထားနိုင်မည့်ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
Show as key on mobile ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။
Draw line to annotation text ခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။ ဒီဇိုင်းရှုထောင့်အရ မှတ်စုအညွှန်းစာသားအတွက် မျဉ်းမလိုအပ်ပါ။
ကျန်သော အညွှန်းစာသားများအားကိုလည်း အပေါ်ကအဆင့်များအတိုင်း ဆက်လက် ထည့်ပေးပါ။
July 1, 2020: 1st stay-home order completely lifted in Yangon
August 16, 2020: 1st local transmission reported in 29 days
September 21, 2020: 2nd stay-home order in Yangon
ဤအညွှန်းစာသားများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မထပ်အောင် ဂရုပြုပါ။ မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံရပြီဆိုလျှင် Proceed > ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် Design ကိုသွား၍ Select layout ကိုရွေးချယ်ပြီး Share option ကို ဖွင့်ခြင်းဖြင့် ကားချပ်ရေးဆွဲခြင်းကို အပြီးသတ်ပါ။
Select layout တွင် Datawrapper (with data) ကိုရွေးချယ်ပါ။
Output locale တွင် English (en-US) ကိုရွေးပါ။
အခြားသူများမှ မိမိ၏ ကားချပ်အား embed လုပ်ခြင်း၊ မျှဝေခြင်းများလုပ်နိုင်ရန်-
Enable social media share buttons ကို ဖွင့်ပါ။
Share chart URL ကို ရွေးချယ်ပါ။
Proceed > ကို နှိပ်ပါ။
ဤနောက်ဆုံးအဆင့်တွင် မိမိစိတ်ကြိုက်သပ်ရပ်လှပစွာရေးဆွဲထားသော ပုံကားချပ်ကို ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် embed လုပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။ PNG ဖိုင်အဖြစ် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ပုံရှင်ကားချပ်အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၃.၁) အညွှန်းစာသားများ ထည့်သွင်းခြင်း
မျဉ်းချပ်များသည်ရိုးရှင်းသော်လည်း ကိုဗစ်၁၉ရောဂါပိုး တွေ့ရှိမှုနှုန်းနှင့်သေနှုန်း စုစုပေါင်းအရေအတွက် (cumulative number) ကို ပုံဖော်ရာတွင်ထိရောက်ပါသည်။ အညွှန်းစာသားများဖြင့် အရေးပါသောဖြစ်ရပ်အချို့ကို မီးမောင်းထိုးပြကာ ဒေတာအချက်အလက်လမ်းကြောင်း trend ကို (သို့) အရေးပါသောမှတ်တိုင်များကို ရှင်းပြနိုင်သည်။ ၂၉ရက်ကြာ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှုကင်းမဲ့ပြီးနောက်တွင် ပထမဆုံးကူးစက်မှုဖြစ်ရပ်ကို သြဂုတ်လလယ်၌ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကူးစက်မှု အဆမတန်များပြားလာခဲ့သဖြင့် စက်တင်ဘာလလယ်တွင် “ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နေအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်” ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့သောအညွှန်းစာသားများနှင့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ဆက်စပ်ရေးဆွဲကာ ပိုမိုအားကောင်းသော သတင်းဆောင်းပါးများကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
၃.၂) မျဉ်းချပ်အပြင် အခြားကားချပ်များ အသုံးပြုခြင်း
မျဉ်းချပ်များသည် ကပ်ရောဂါမည်မျှအထိဖြစ်ပွားနေသည်ကို ပြသရန်အလွန်ပင်အသုံးဝင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခုရေးဆွဲထားသော စုစုပေါင်းဖြစ်ပွားမှုပြကားချပ်တွင် အတက်သာရှိသည်ကိုတွေ့ရပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် အစိုးရ၏ ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်းများ၏ ထိရောက်မှုကို ရေးသားမည်ဆိုပါက အထက်တွင်ရေးဆွဲခဲ့သော မျဉ်းချပ်များကို စံအဖြစ်သုံးရန် မသင့်တော်ပါ။ သို့ဆိုလျှင် ကိုဗစ် ၁၉ရောဂါတွေ့ရှိမှုနှုန်း အပြောင်းအလဲကို ပြသနိုင်မည့်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ အဖြေကတော့ ရှိပါသည်။ Logarithmic ကားချပ်များရေးဆွဲခြင်းဖြင့် အပြောင်းအလဲများကို ပြသနိုင်ပါသည်။ ကိုဗစ် ၁၉ အချက်အလက်များအတွက် ထပ်မံတင်ပြမည့် ဒေတာချက်ပြုတ်နည်းအသစ်တွင် နိုင်ငံနှစ်ခုအကြား ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန် log-scale ဖြင့် မျဉ်းချပ်များ ရေးဆွဲနည်းနှင့် နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရှိ မတူညီသော လူဦးရေကို အချိုးကျ ညှိနှိုင်းသည့်နည်းလမ်းကို တင်ပြပေးသွားပါမည်။